umgca wemveliso yesichumiso somgquba oguqulweyo. - YiZheng Heavy Oomatshini Co., Ltd.
Isichumiso segranular organic sinika izinto eziphilayo emhlabeni, ngaloo ndlela sinika izityalo izondlo kunye nokunceda ukwakha iinkqubo zomhlaba ezisempilweni. Isichumiso sendalo ke ngoko sinamathuba amakhulu eshishini. Ngothintelo ngokuthe ngcembe kunye nokuthintelwa kokusetyenziswa kwesichumiso kumazwe amaninzi nakumasebe afanelekileyo, ukuveliswa kwesichumiso sendalo kuya kuba lithuba elikhulu kwishishini.
Isichumiso segranular organic sihlala sisetyenziselwa ukuphucula umhlaba kunye nokubonelela ngezondlo zokukhula kwesityalo. Ziyakwazi ukubola ngokukhawuleza xa zingena emhlabeni, zikhuphe izondlo ngokukhawuleza. Kuba izichumisi eziqinileyo ezixutyiweyo zifunxwa kwinqanaba elincinci, zihlala ixesha elide kunezichumisi ezingamanzi. Ukusetyenziswa kwesichumiso esenziwe ngezinto eziphilayo kunciphise kakhulu umonakalo kwisityalo ngokwaso nakwimeko-bume yomhlaba.
Imfuneko yokuqhubeka kokuvelisa isichumisi se-organic kumgquba we-organic granular:
Isichumisi somgubo sihlala sithengiswa ngesixa esikhulu ngexabiso eliphantsi. Ukuqhubekeka kokusebenza kwesichumiso se-organic umgubo kungonyusa ixabiso lesondlo ngokudibanisa ezinye izinto ezinjenge-humic acid, eluncedo kubathengi ukukhuthaza ukukhula kokuqulatha okunesondlo kwizityalo kunye nabatyali mali ukuze bathengise ngamaxabiso angcono navakalayo.
Inkqubo yemveliso yezichumiso zegranular: ukuvuselela-i-granulation-ukomisa-ukupholisa-isisafu-ukupakisha.
Nika iinkqubo ezahlukeneyo zemveliso yemigca yegranular yokuvelisa isichumisi ukuhlangabezana neemfuno zabathengi, kwaye izixhobo kulula ukuzisebenzisa.
1. Hlanganisa kunye negranulate
Ngexesha lenkqubo yokugungqisa, umgubo olungumgubo uxutywe nazo naziphi na izinto ezinqwenelekayo okanye iifomula zokwandisa ixabiso lesondlo. Emva koko sebenzisa igranulator yesichumiso esenziwe ngezinto eziphilayo ukwenza lo mxube ube ngamasuntswana. Isichumisi se-organic organic sisetyenziselwa ukwenza amasuntswana angenathuli ngobukhulu anokulawuleka kunye nemilo. Isichumisi esitsha sesichumisi sendalo samkela inkqubo evaliweyo, akukho kukhutshwa kothuli ngokuphefumla, kunye nemveliso ephezulu.
2. Yomile kwaye ipholile
Inkqubo yokumisa ilungele sonke isityalo esivelisa umgubo kunye nezinto eziqinileyo zegranular. Ukomisa kunganciphisa umxholo wokufuma okubangelwa ngamasuntswana ezichumiso eziphilayo, kunciphise ubushushu obushushu kwi-30-40 ° C, kwaye umgca wemveliso yezichumiso zegranular uyamkela isomisi esihambisayo kunye nesokuphola.
3. Ukuhlola nokupakisha
Emva kwegranulation, amasuntswana esichumiso somgquba kufuneka ahlolwe ukuze afumane ubungakanani bamasuntswana afunekayo kwaye asuse amasuntswana angahambelaniyo nobukhulu bamasuntswana emveliso. Umatshini we-roller sieve sisixhobo esiqhelekileyo sokuqhawula, esetyenziselwa ikakhulu ukuhlelwa kweemveliso ezigqityiweyo kunye nokuhlelwa ngokufanayo kweemveliso ezigqityiweyo. Emva kokusiwa, ubukhulu beesuntswana ezifanayo zamasuntswana esichumiso somgquba kuyalinganiswa kwaye kupakishwe ngomatshini wokupakisha oluzenzekelayo ohanjiswe ngumthutho webhanti.